Al-Shabaab oo sheegtay inay la wareegeen deegaan Shabeellada Hoose ka tirsan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Al-Shabaab oo sheegtay inay la wareegeen deegaan Shabeellada Hoose ka tirsan
Al-Shabaab oo sheegtay inay la wareegeen deegaan Shabeellada Hoose ka tirsan
Dagaal culus oo saaka waaberigii hore ka Dhacay gobolka shabeelada Hoose ayaa waxaa ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah.
Degaanka sabiid oo 8-km dhinaca Koonfureed kaga beegan degmada Afgooye ee Goblka Shabeellaha Hoose ayaa dagaal culus saaka ku dhex-maray Ciidamada xoogga Soomaaliya & Xubno ka tirsan dagaalameyaasha Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa ka dib markii Al-Shabaab ay weerareen Saldhiga Ciidamada dowladda ku leeyihiin Buundada Sabiib, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo muddo socday.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dagaalka Al-Shabaab khasaare xooggan ku garsiiyeen, balse Al-Shabaab ayaa dhankooda warar ay ku qoreen Baraha ay ku leeyihiin Internet-ka waxaay ku sheegteen inay la wareegeen degaanka Sabiid oo hoostaga degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Warkan kasoo baxay Ururka Al-Shabaab ee ku aadan inay dagaal kula wareegeen degaanka Sabiid ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaan weli ka hadlin saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya & Maamulka degmada Afgooye.
Previous articleMaxay garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ka dhaheen BBI?
Next articleWaaxda NYS oo laga dalbaday inay bixiso lacagaha qandaraasleyda